जब ड्यानियलले सनी लियोनीलाई अरु कसैसँग यौ’नमा लि’प्त भएको देख्थे… – Ujyaalo Patrika
जब ड्यानियलले सनी लियोनीलाई अरु कसैसँग यौ’नमा लि’प्त भएको देख्थे…
सनी लियोनीका पति ड्यानियल हुन् । ड्यानियल एक प्रसिद्ध गितारवादक हुन् । उनको जन्म न्यूयोर्कमा भएको थियो । तीन सन्तानका अभिभावक यी दुईको पहिलो भेट भने निकै साधारण थियो । सामान्य साथीसँग जाँदा भेगासको एक क्लवमा यी दुईको भेट भएको थियो । सनीका अनुसार यो उनको लागि पहिलो नजरको प्रेम थिएन तर ड्यानियल भने सनीलाई पहिलो नजर देख्नासाथ मन पराउन थालेका थिए ।
यो पनि : मिस नेपालहरू कुन दुनियाँमा मस्त ?
नेपाललाई विश्वभर चिनाउने वाचा गरी सुन्दरीको ताज पहिरिएकाहरू अहिले आफैं गुमनाम छन् । कोही रंगीन दुनिँयाबाट हराएर व्यवसायमा रमाइरहेका छन् त कोही विदेश भासिएका छन् । कोहीचाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा छन् ।
हालसम्म ‘हिडन ट्रेजर’ (मिस नेपाल आयोजक) ले २५ नेपाल सुन्दरी जन्माएकोमध्ये अधिकांश झिलिक्क उदाएर क्षणभरमै गुमनाम बनेका देखिन्छन् । केही मात्र छन् रंगीन दुनियाँमा संघर्ष गरिरहेका । जस्तो माल्भिका सुब्बा, मलिना जोशी, सुगारीका केसीहरू सञ्चारको दुनियाँमा, रुबी राणा, उषा खड्गीहरू व्यवसायमा । केही ब्राण्ड एम्बासडर बनेर विज्ञापनमा झल्याकझुलुक देखिन्छन् । अधिकांशचाहिँ विदेश भासिएका छन् ।
०५१ सालका मिस नेपाल रुबी राणा शाह । चलचित्रदेखि मोडलिङमा जम्ने प्रयास गरिन् । अहिले कुपण्डोलमा ‘रुबीज कलेक्सन’ चलाएर बसेकी छन् । रुबीपछि सुमी खड्काले नेपाल सुन्दरीको ताज पहिरिइन् । रुबीझैं सुमी पनि टिकिनन् । एयरहोस्टेसको जागिर खान पुगिन् । तेस्रो मिस नेपालको ताज पहिरिइन् पुनम घिमिरेले । उनी अमेरिकातिर भासिइन् । १५ वर्षपछि स्वदेश फर्किएर अहिले व्यवसायमा छन् । पोखराकी निलिमा गुरुङ त्यसपछिका मिस नेपाल । म्युजिक भिडियो र मोडलिङमा जम्ने प्रयास असफल भएपछि बेलायततिर भासिइन् । ०५४ सालमा नेपाल सुन्दरीको ताज पहिरिएकी झरनाको हाल पनि उही हो । रंगीन दुनियाँमा सफलता पाए पनि प्रेममा झेल्नुपरेको असफलताका कारण उनी पनि पूर्व मिस नेपालझैं विदेशतिरै अल्झिरहेकी छन् । ज्योति प्रधान पनि पुनम घिमिरेझैं अमेरिका गइन् । मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेकी श्वेता सिंहले आइपिडी नामक संस्था चलाएर बसिन् । त्यहाँ पूर्व मिस नेपाल प्रीति सिटौलासमेत जोडिन पुगिन् ।
०५७ सालमा नेपाल सुन्दरी बनेकी उषा खड्गी फेसन डिजाइनरको रूपमा सक्रिय छिन् । माल्भिका सुब्बा टेलिभिजनतिर जमेकी छन् । प्रीति सिटौला टेलिभिजनमा काम गरेर जम्न सकिनन् । पायल शाक्य अष्ट्रेलिया पुगिन् । सुगरिका केसी आरजेको रूपमा जमिन् । सिताष्मा चन्द मिस नेपाल बनेपछि अस्ट्रेलियालीसँग विवाह गरेर उतै भूमिगत भइन् । ६६ सालकी मिस नेपाल जेनिशा मोक्तान दीपक मलहोत्रा पुत्र दिकेशसँग लगनगाँठो कसेपछि अहिले व्यापारिक संसारमा हराइरहेकी छन् । सदीक्षा श्रेष्ठ केही वर्ष विज्ञापनमा देखिइन् । ६८ का मिस नेपाल मलिना जोशी केही सिनेमामा देखिइन् । अहिले रंगीन दुनियाँभन्दा पर छिन् । ६९ को नेपाल सुन्दरी सृृष्टि श्रेष्ठले केही सिनेमामा काम गरिन् तर अधिकांश सिनेमा फ्लप भएपछि उनी पनि रंगीन दुनियाँबाट हराइन् ।
०७० की नेपाल सुन्दरी इशानी श्रेष्ठ दन्तरोग विशेषज्ञ । अहिले सामाजिक काममा सक्रिय छन् । इभाना मानन्धरले सीई कन्स्ट्रक्सनमा बजार प्रवद्र्धनको काममा पितालाई सघाइन् । सुबिन लिम्बू, अश्मि श्रेष्ठ सबै मिस नेपाल गुमनाम छन् । ०७४ की मिस नेपाल निकिता चण्डकले रानीमहल, साङ्लो चलचित्रमा काम गरिन् । दुवै फ्लप । कम्युनिष्ट बाबुआमा विरोध खतिवडा र मनु सिग्देलपुत्री शृंखला त्यसपछिको नेपाल सुन्दरी । यस वर्ष ०७७ सालको नेपाल सुन्दरीको ताज नम्रता श्रेष्ठले पहिरिँदा धेरै झुक्किए नायिका नम्रता हुन् कि भनेर । हेर्न बाँकी छ शृंखला, नम्रताहरू यो रंगीन दुनियाँको चमकधमकमा कतिन्जेल टिक्छन् वा पूर्व मिस नेपालझैं हराउँछन्
Previous मान्छे गाडेको ठाउँमा रातिको १२ बजे पुगी चिहान खनेका झाक्रीको अचम्मको खुलासा, आकाशमा उड्छन गड्यौला खान्छन (भिडियो सहित)
Next १३ वर्षीया किशोरीलाई १० वर्षे प्रेमीले ग’र्भवती बनाएपछी . . . .